मन्त्रीको मुख सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको चेतावनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘लगाम’ उपहार पठाऊँ कि सम्हाल्नुहुन्छ आफ्ना मन्त्री ? : कांग्रेस प्रवक्ता
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मन्त्रीहरूको मुख सम्हाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार ट्वीट गरेर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो पार्टीमाथि चन्द समूहको हिंसा पक्षपोषण गरेको भनी लगाएको आरोप अराजनीतिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनै जब असंसदीय शब्द बोल्नुहुन्छ संसदमा तब कुनै `फोटोकपी´ मन्त्रीसंग संस्कारको अपेक्षा कसरी गर्नु? अराजनीतिक बोलिको जवाफ दिंदै हिंड्नु उचित हुन्न l भनाइ छ हलेदो भनेर चिनिसकेपछी धेरै कोट्याउनु हुन्न !@PM_Nepal `लगाम´ उपहार पठाउं कि सम्हाल्नु हुन्छ आफ्ना मन्त्री?
प्रकाशित : असार २६, २०७६ २१:४७
बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इरानी पानीजहाज तथा बेलायती ट्यांकरको बीचमा बेलायती नौसैनिक पानीजहाज एचएमएस मन्ट्रोज पसेर इरानी जहाजलाई मौखिक चेतावनी दिएको थियो। गतसाता इरानले जिब्राल्टार टापुनजिकै आफ्नो ट्यांकर कब्जा गरिएपछि त्यसको बदला लिने बताइरहेका बेला उक्त घटन भएको हो।
अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले इरानी रेभोल्युसनरी गार्ड कोरको स्वामित्वका जहाजहरूले ‘ब्रिटिश हेरिटेज’ नामक ट्यांकरलाई खाडीबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ जाँदै गर्दा अवरोधको प्रयास गरेका जनाएका छन्। सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यसलगत्तै ट्यांकरको सुरक्षामा सँगै रहेको बेलायती नौसैनिक जहाज एचएमएस मन्ट्रोजले जहाजतिर बन्दुक ताकेर फर्कन चेतावनी दिएपछि इरानी जहाज फर्केका थिए।
गत साता बेलायती रोयल मरिनको सहयोगमा एक इरानी तेल ट्यांकरलाई जिब्राल्टारमा कब्जामा लिइएको थियो। युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै उक्त ट्यांकर सिरियातर्फ गइरहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।उक्त घटनापछि इरानी विदेश मन्त्रालयले बेलातयी राजदूतसँग सोधपुछ गर्दै बेलायतले ‘समुद्री डकैती’ शैलीमा आफ्नो ट्यांकर कब्जा गरेको भन्दै विरोध जनाएको थियो। घटनापछि एक इरानी अधिकारीले ट्यांकर फिर्ता नभए बेलायती ट्यांकर कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले बुधबार आफ्ना ट्यांकर वरपर सैन्य जहाज खटाएर त्रसित मानसिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै बेलायतप्रति व्यंग्य गरेका थिए। यी पछिल्ला घटना इरान र अमेरिकाबीच चर्कंदो तनावमाझ भएका छन्।सन् २०१५ को इरानी परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेसँगै दुई देशबीचको तनाव चुलिएको छ। तर सम्झौताका पक्षधर बेलायतसहित अन्य युरोपेली देशहरूले सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन्।
यद्यपि, पछिल्लो समय बेलायत र इरानबीच देखिएको तनावका कारण परमाणु सम्झौता संकटमा परेको आंकलन गरिएको छ। यसअघि गत जुनमा दुइटा तेल ट्यांकरमाथि गरिएको आक्रमणमा इरानले गरेको बेलायतको आरोप छ।
‘तेल ट्यांकरलाई होर्मुज स्ट्रेटमा अवरुद्ध गरेको बेलायतको आरोप झूटो’ भएको इरानले दाबी गरेको छ। ‘बेलायती तेल ट्यांकरलाई इरानी गार्डले आक्रमण गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्ने बेलायती भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको’ इरानी गार्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विगत २४ घण्टामा बेलायतसमेतका कुनै पनि जहाजमाथि आक्रमण गरिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बेलायत सरकारले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दैर् ‘तीनवटा इरानी पानीजहाजमा आएका सशस्त्र समूहले अरब सागरमा बेलायती तेल ट्यांकरमा आक्रमण प्रयास गरेको’ दाबी गरेको थियो।
एचएमएस मोन्ट्रोज युद्धपोतले इरानी आक्रमणलाई निस्तेज बनाएको बेलायतको भनाइ छ। तर विदेशी जहाज नियन्त्रणमा लिन आदेश दिइएको भए इरानी गार्डले ‘तत्कालै, निर्णायक र तीव्रता’ का साथ गर्न सक्ने इरानले दाबीसमेत गरेको छ। जिब्राल्टारको तटीय क्षेत्रबाट गत जुलाई ४ मा इरानी तेल ट्यांकरलाई बेलायतले नियन्त्रणमा लिएपछि दुवै देशबीच तनाव जारी छ। करिब २० लाख ब्यारेल तेल बोक्ने क्षमताको ‘ग्रेस १’ नामक तेल ट्यांकर बेलायती रोयल मरिनको सहयोगमा जिब्राल्टरका भन्सार अधिकारी तथा प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ।
इरानी सरकारी टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै इरानी राष्ट्रपति रौहानीले बेलायतले होर्मुजको जलक्षेत्रमा असुरक्षा बढाएको र त्यसको नतिजा बेलायतले भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
माधव अर्याल, घनश्याम गौतम